Caalamka, 12 December 2017
Talaado 12 December 2017
Mudaaharaadyo Rabshado Watay oo Ka Dhacay Lubnaan
Ciidamada amaanka dalka Lubnan ayaa u adeegsaday suntan dadka ka ilmeysiisa iyo tubooyinka biyaha tuura, dad badan oo Axadii maanta isugu soo baxay agagaarka safaaradda uu Mareykanka ku leeyahay magaalada Beyruud.
Diyaaradaha Israel oo Duqeeyay Gaza
Diyaaraha dagaalka ee Israel ayaa saaka aroortii duqeyn ku bartilmaameedsaday bakhaaro ay Israel sheegtay inay leeyihiin garabka hubeysan ee ururka Hamaas ee magaalada Gaza
Somalia oo Walaac ka Muujisay Go'aankii Trump ee Qudus
War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibedda ee Soomaaliya ayaa go’aankaasi ku tilmaantay inuu yahay mid halis ah, isla markaana uu halis ku yahay mustaqbalka Bariga-dhexe iyo guud ahaan Caalamka.
Maxaa ka dhallan kara go'aanka Trump ee Qudus?
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadi shalay ku dhawaaqay in Mareykanka uu si rasmi ah ugu aqoonsaday magaalada Qudus in ay tahay caasimada Israel.
Netanyahu: Dalal kale ayaa raaci doona go'aanka Mareykanka
Ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuusan shaki ka qabin in dalal kale ay raaci doonaan Mareykanka, ayaga oo Jerusalem u aqoonsanaya caasimadda Israel, islamarkaana marka safaaradda Mareykanka loo raro halkaas, ay sidoo kale kuwooda u rari doonaan.
Mareykanka oo Qudus u aqoonsaday caasimada Israel
Muxuu ka dhigan yahay dilka Cali Cabdalla Saalex?
Xuutiyiinta oo sheegay in ay dileen Cali Cabdalla Saalax
Warar goor dhowayd kasoo baxay warbaahinta Xuutiyiinta ayaa sheegaya in Cali Cabdalla Saalax lagu dilay iska horimaad dhacay maanta.
Dalalka Carabta oo Mareykanka uga digay aqoonsiga Jerusalem
Wasiirka arrimaha dibedda Jordan, Ayman Safadi ayaa sheegay inuu u sheegay xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Rex Tillerson “cawaaqibka qatarta leh” ee ka dhallan kara haddii Mareykanka uu Jerusalem u aqoonsado caasimadda Israel.